Izikholo zobuKristu kunye neZenzo
Hlola iikholelwa ezide zamaKristu eCoptic
Amalungu eCawa yamaKristu eCoptic akholelwa ukuba uThixo nomntu badlala indima ekusindisweni , uThixo ngokufa komhlatshelo kaYesu Kristu kunye nabantu ngokusebenzisa imisebenzi yokufaneleka, njengokuzila ukudla , ukunikela ngokunikela ngemali kunye nokufumana iisramramenti.
Eyasungulwa kwinkulungwane yokuqala eYiputa, iCoptic Christian Church inokwabelana ngeenkolelo kunye nezenzo kunye neCawa yamaRoma Katolika kunye neCawa yama-Eastern Orthodox . "IsiCoptic" sithathwe kwigama lesiGrike elisho "umYiputa."
Icawa yeCoptic Orthodox ithi ukulandelana kwabapostile ngoYohane uMarko , umbhali weVangeli likaMarko . Iikopi zikholelwa ukuba uMarko ungomnye wabangu-72 abathunywe nguKristu ukuba ashumayele (Luka 10: 1).
Nangona kunjalo, iiCopt zahlula kwiCawa yamaKatolika ngo-451 AD kwaye zinepapa kunye nababhishophu. Icawa iqhubekile kwisithethe nangokwesiko kwaye ibeka ingqalelo ekugxininiseni, okanye ukukhanyela.
Ubhaptizo - Ubhaptizo lwenziwe ngokumisela umntwana kathathu ngamanzi angcwalisiweyo. I-sakramente ifaka i-liturgy yomthandazo kunye nokuthambisa ngeoli. Ngaphansi komthetho wamaLevi , unina uhlala emva kweentsuku ezingama-40 emva kokuzalwa komntwana kunye neentsuku ezingama-80 emva kokuzalwa komntwana wesifazane ukuba abhaptizwe umntwana. Kwimeko yobhaptizo lomntu omdala, loo mntu uphazamisekile, angene kwifolda yobhaptizo entanyeni yabo, kwaye intloko yabo idibene kathathu ngumbingeleli. Umbingeleli umele emva kwekhefu xa ehlazisa intloko yomfazi.
Ukuvuma - Iipopts zikholelwa ukuba izono zithethwa kubafundisi kubalulekile ukuxolelwa kwezono . Ukunyameka xa uvuma izono kuthathwa njengenxalenye yesohlwayo sesono. Xa uvuma, umbingeleli uthathwa njengoyise, umgwebi kunye notitshala.
Ingqungquthela - I- Ekaristi ibizwa ngokuba yi "Crown of Sacraments." Isonka newayini zizingcwaliswa ngumbingeleli ngexesha lobunzima .
Abafumanayo mabazilawule iiyure ezi-9 ngaphambi kokudibana. Izibini ezitshatileyo azifanele zenze ubudlelwane ngokwesondo kunye nosuku lobudlelane, kunye nabasetyhini bangenakufumana umtshato.
UZiqu-zintathu - IiCopt zibambe inkolelo-mnye kuBathathu Emnye , abantu abathathu kuThixo omnye: uYise , uNyana, noMoya oyiNgcwele .
UMoya oyiNgcwele - uMoya oyiNgcwele nguMoya kaThixo, umniki-ubomi. UThixo uphila ngoMoya wakhe kwaye akanakho omnye umthombo.
UYesu Kristu - uKristu kukubonakaliswa kukaThixo, iLizwi eliphilayo, elithunyelwe nguBawo njengombingelelo wesono sabantu.
IBhayibhile -ICawa yamaKristu eCoptic ibona iBhayibhile "idibana noThixo kunye nokusebenzisana naye ngomoya wokunqula nokuhlonela uThixo."
I-Creed - Athanasius (296-373 AD), umbhishophu waseCoptic e-Aleksandria, eYiputa, wayengumchasi omkhulu wama-Arianism. I- Athanasian Creed , inkulumo yokuqala yokholo, ibonakala kuye.
Abangcwele kunye neenkonkco - Iipopoti ezihlonishwayo (ezingenakunqulo) abangcwele kunye neempawu, eziyimifanekiso yabangcwele kunye noKristu abadwebe ngomthi. ICoptic Christian Church iyifundisa ukuba abangcwele bangabambeleli kwimithandazo yabathembekileyo.
Usindiso - AmaKristu aseCoptic afundisa ukuba uThixo nomntu banendima ekusindisweni kwabantu: uThixo, ngokufa kukaYesu nokuvuka kwakhe ; umntu, ngemisebenzi emihle, ezo ziqhamo zokholo .
Iingxowa - iiCopt zenza iisamramente ezisixhenxe: ubhaptizo, ukuqinisekiswa, ukuvuma (ukuhlawulwa), uMthendeleko (uMtya), umtshato, ukunyanzelwa kwabagulayo kunye nokulungiswa. Iingxowa zithathwa njengendlela yokufumana ubabalo lukaThixo , ukukhokelwa nguMoya oyiNgcwele kunye nokuxolelwa kwezono.
Ukuzila ukutya - Ukuzila ukudlala indima ephambili kwiCoptic yobuKristu, efundiswa "njengomnikelo wothando olungaphakathi olwenziwe yintliziyo kunye nomzimba." Ukuyeka ukutya kunokufaniswa nokuzingca. Ukuzila ukutya kuthetha ukutshutshiswa kunye nokuguquka , kuxutywa kunye novuyo olungokomoya kunye nenduduzo.
Inkonzo yoNqulo - Iicawa ze-Orthodox zeCoptic zibhiyozela ubunzima, eziquka imithandazo yendabuko yemilando evela kwimigqaliselo, ukufundwa kweBhayibhile, ukucula okanye ukulila, ukuxhaswa, intshumayelo, ukulungiswa kwesonka kunye newayini kunye nokudibana.
Umyalelo wenkonzo ushintshile uncinci ukususela kwinkulungwane yokuqala. IiNkonzo zihlala zigcinwe ngolwimi lwendawo.
> (Imithombo: iCopticChurch.net, www.antonius.org, kunye newadvent.org)
Amish Believes and Practices
ICoptic Orthodox Church
Iingcebiso zoLwandle lokuThuthukisa kunye neNdlela ezisebenza